Uhlalutyo lwewebhu ye-Semalt
Ukufumana iiwebhusayithi zakho zifikelele kwisakhono esipheleleyo akukho lula njengoko kunokuvakala. Kwaye ndiqinisekile unokuba uyibonile lonto ngoku. Kuthatha ukubeka esweni rhoqo, ukubambisa, kunye nohlalutyo ukuze uqiniseke ukuba wenza izinto ngendlela eyiyo. Amaxesha amaninzi uphononongo olunjalo lungcono xa lwenziwa ziingcali ezinamava okwazi ukuba zijonge ntoni kwiwebhusayithi yakho. Njengosomashishini, siqinisekile ukuba uze nokukholelwa ukuba kungcono ukwenza izinto ngokwakho. Nangona kunjalo, akukho mntu usisiqithi. Ukwenza ukuba uzive ngcono, kunye noSemalt, uyazi onke amanyathelo esawenzayo ekwenzeni iwebhusayithi yakho ibe ntle.
Ke musa ukucinga ngayo njengoko ubeka iwebhusayithi yakho kulawulo lwethu kodwa kunokuba uyithathe njengentsebenziswano. Ngale ndlela, singawudlulisela ngcono umbono wakho kwiwebhusayithi yakho kwaye uqiniseke ukuba uvelisa ngokukhokelayo.
Ukuqonda iziseko zokusetyenziswa kwe-SEO, singacebisa ukuba uphonononge indawo yethu ukuze ufunde ngakumbi. Sinemithwalo yemixholo yemfundo ukukunceda wazi ukuba singakunceda njani.
Apha, sixoxa ngazo zonke izixhobo ezifunekayo kuhlalutyo olubanzi lweiwebhusayithi. Oku akubandakanyi okwakho kodwa kukhuphiswano lwakho. Oku kufumanisa ukusetyenziswa kwamagama aphambili kwiwebhusayithi yakho, kwaye ikwinqanaba lamagama aphambili. Siyahamba sikubonisa iphepha lakho lokuqhuba (eli phepha elindwendwelwa ngabantu abaninzi), kwaye sibonisa isikhundla sakho kwiziphumo zokukhangela.
Xa sijonga ukhuphiswano lwakho, sifumanisa ukuba yintoni le usilela kuyo. Ukufunda i-metrics zokhuphiswano kusivumela ukuba siqonde izizathu zokunyuka kwenani lokugcwala kwabantu. Emva koko silusebenzisa olu lwazi kwindawo yakho.
Siyazidla ngokuchaza nokwaphula izinto ukuze sikuncede uqonde. Asiyithandi indlela "Ndiyabukela indlela." Endaweni yoko, oku sikuthatha njengentsebenziswano. Ngale ndlela, sobabini sixuba iikhemikhali kwilebhu yemichiza "ngokomfuziselo," kwaye asizishiyi zonke izinto zovuyo kubafundi be-brainy.
Ngokwenkcazo, i-SERP imele iZiphumo zeNjini yokuKhangela. La ngamaphepha aboniswa ziinjini zokukhangela xa umsebenzisi okanye kwimeko uSemalt ecela oko. Eyona njongo iphambili yesi siphumo kukuqonda ukuba asetyenziswa ngokufanelekileyo kangakanani amagama akho kwiwebhusayithi yakho.
I-SERP likhadi lengxelo yewebhusayithi yakho. Ibandakanya isihloko, ikhonkco kwiphepha lewebhu yakho, kunye nenkcazo emfutshane. Le nkcazo ibonakalisa apho amagama aphambili athe ahambelana nomxholo okwiphepha. Oku kuthetha ukuba awunakuba newebhusayithi yokuthengisa iimoto, kwaye amagama akho aphambili ziiNtlanzi, ulwandle, i-Aquarium, njl njl. Ufumana inqaku. Nawaphi amagama aphambili owasebenzisayo afuna ukungqinelana neenkonzo ozibonelelayo. Ukuba akukhange kube njalo, iwebhusayithi yakho iya kuqhubeka nokutsala abaphulaphuli abangalunganga.
Ngenxa yeenkcukacha ezile ngxelo, ihlala inamaphepha aliqela. Nangona ungathintela imbonakalo, sikhetha ukuya ngokupheleleyo, ngokuwela zonke ii-T kunye nokuphawula i-I.
Ukujonga iziphumo, iphepha lokuqala linolwazi olufanelekileyo. Njengoko usiya ngasekupheleni kwengxelo, ukubaluleka kwedatha ekuyo kuxhomekeke ekunciphiseni de wenze isigqibo sakho sokuba ungaqhubeki. Njengokukhangiswa okanye nantoni na ebomini, ezona zinto zibalulekileyo ziza kuqala.
Ekugqibeleni, iSERP ikubonisa ukuba yeyiphi isikhundla iwebhusayithi yakho ethatha kwigumbi lokufundela lesiza. Kwaye ekubeni uvelisa ukukhokelela ngokomzimba usebenzisa amagama aphambili, kufuneka uqonde ukuba wenza ntoni okungalunganga kunye nento oya kuyilungisa ukuyilungisa. Ngokwazi okungalunganga, siyayazi indawo ekufuneka sisebenze kuyo.
Kukho izinto ezine zeSERP. Sineentengiso ezihlawulelwayo zokukhangela, iziphumo zokukhangela eziphilayo, iziphumo zokukhangela, kunye nophando olunxulumene noko.
Iintengiso ezihlawulelweyo zokukhangela: yindlela yokufumana ukungxinana kwabantu. Apha, uhlawula iGoogle yokwandisa iwebhusayithi yakho ngokutsala umdla wababukeli kuyo. Ngale ndlela, indawo yakho ifumana umbono, kodwa oku akusoloko kukukhokelela. Kwaye, akukho siqinisekiso sokuba xa uyeka ukuhlawula ezi ntengiso, uya kuqhubeka nokugcwala kwitrafikhi yakho.
Iziphumo zokukhangela eziphilayo: oku kubhalwe ngu-Semalt kuyo yonke loo nto. Kulapho usebenzisa i-SEO ukuzoba ukugcwala kwindawo yakho ngokwemvelo. Iziphumo zokukhangela eziphilayo zithathwa njengezinokuthenjwa. Ngokusebenzisa ubungcali kwe-SEO, i-gig yakho ihlala ibekwa phezulu kumaphepha aphezulu kaGoogle. Oku kunika iwebhusayithi yakho ithuba elingcono lokuguqula oku kunqakraza kubathengi.
Iziphumo zokukhangela zalapha: apha, ubona uluhlu, imephu, kunye neenombolo zonxibelelwano kumashishini akwindawo yokukhangela. Irediyo yokukhangela igqitywa yinqwaba yeemeko kunye nokukhethwa komsebenzisi. Kungenxa yeso sizathu le nto kubalulekile ukuba iinkampani zimisele ngaphakathi kwishishini likaGoogle.
Ukukhangelwa okunxulumene noko: Ukukhangela okunxulumene noko kujongwa kakhulu kumaxesha amaninzi. Ezi ziibhokisi ezincinci ozibonayo emazantsi ephepha lesiphumo emva kokuba ukhangele nantoni na. Ezi zinto zenziwe ngokusekelwe kumagama aphambili anokusetyenziswa ngumsebenzisi kwibhokisi yokukhangela.
Nangona kunjalo, i-SERP yeenjini ezinkulu zokukhangela njengeGoogle, Bing, kunye neYahoo inokubandakanya ukuboniswa kweempawu ezininzi zziphumo. Babandakanya izinto ezinjengomgangatho wes snippet yakho, imifanekiso, iimephu, iinkcazo zebhokisi, njl.njl.
Ikwabizwa ngokuba ngumtya wokukhangela komsebenzisi, eli ligama okanye umtya wabasebenzisi bamagama kwibhokisi yokukhangela. Ngaba uyazi ukuba unokukhangela nantoni na kuGoogle? Ewe, kukho inani leendlela umsebenzisi anokuzifuna, kodwa amagama aphambili angagcinwa.
Kodwa ukuba ii-injini zokukhangela zixhomekeke kuluphi uhlobo lomsebenzisi yedwa, iisayithi ezininzi azisokuze zikhanyise. Ke, ii-injini zokukhangela ziguqula i-algorithm yayo kunye nobukrelekrele ngokubanzi bokukhangela kwayo.
Umbuzo wokukhangela awusenakwenzeka ngokusekwe kuphela kukhangelo lomsebenzisi. Endaweni yoko, iinkampani ezinjenge-Google factor kwezinye izinto eziguquguqukayo. Ixesha elingaphezulu, umxholo ukhule ukusuka kokuthelekisa amagama kunye nokuqiqa okuqiqileyo. Ngale ndlela, amagama apelwe ngokuchanekileyo ayalungiswa, kwaye amagama aphambili ayaboniswa.
Umxholo ukukubonisa ukuba iGoogle iyenza njani iwebhusayithi yakho. Ngaba bayigqala njengomthombo owahlukileyo okanye akunjalo? Apha, unokujonga ipesenti ngqo yokuba ungafani kangakanani nomxholo wakho. Sonke sifuna ukukhethekileyo okanye ukwahluka, kwaye eli nqaku lisinceda ukufezekisa oko. Ngomxholo, ufunda ukuba zeziphi iinxalenye zesicatshulwa sakho ezichazayo, kwaye ufumana ubeko kumthombo ophambili.
Akukho mntu usisiqithi, ngoko lindela ukubona okwethutyana. Kungumsebenzi wethu, nangona kunjalo, ukwenza isicatshulwa sakho sibe sesingaqhelekanga kwaye sikhethekileyo njengoko kunokwenzeka. Nangona uqokelela idatha evela kweminye imithombo, kufuneka uyenze eyakho, yongeza ngokwakho ngokwakho kunye nenkampani kuyo. Oku kuhamba indlela ende ukunceda abafundi bakho ukuba banxibelelane ngcono kwinkampani nakwiimpawu zakho.
Ngonxibelelwano olusebenzayo lomsebenzisi, sinokulawula iwebhusayithi ezininzi ngexesha. Ngokuthumela iicomments zakho okanye ii-URLs kuGoogle, singakwazi ukulandelela ukusebenza kwazo ngokulula. Ngomphathi wewebhusayithi weGoogle, unazo zonke izixhobo oyifunayo zokujonga nokuphucula indawo yakho. Ukonwabela iinkonzo zomphathi wewebhusayithi weGoogle, kufuneka kuqala wenze iakhawunti. Umphathi wewebhu weGoogle sisixhobo esibalulekileyo kwimpumelelo yayo nayiphi na iwebhusayithi. Kuya kude kukubonisa ukuba iwebhusayithi yakho isebenza njani kwiifowuni kunye neetafile, ubone ezinye iisayithi ezinxibelelanisa neyakho, kwaye iphonononga imibuzo yakho.
Umphathi wewebhusayithi kaGoogle angakujonga njani ukusebenza kwewebhusayithi yakho?
Iyaqinisekisa ukuba uGoogle unokufikelela kumxholo kwiwebhusayithi yakho
Ikuvumela ukuba ungeze kwaye ususe amaphepha kwiiwebhusayithi zakho
Kuyanceda ukuvavanya iwebhusayithi yakho kwaye ufumane iindlela zokubonelela ngamava angcono abafundi bakho.
Ungayigcina iwebhusayithi yakho ngaphandle kokuphazamisa ubukho bayo kwiziphumo zokukhangela.
Ungafumanisa kwaye ususe iingxaki ze-malware okanye spam ekusenokwenzeka ukuba ziye zatyhutyha kwiindawo ezinamaphiko ukuba zikhangelwe enye indlela.
Umphathi wewebhu weGoogle sisixhobo esibalulekileyo xa kuhlaziywa iwebhusayithi. Isibonisa apho kwaye senze ntoni.
Oku kuhlalutya ukukhawuleza kwamaphepha akho ewebhu. UGoogle usebenzisa olu hlalutyo ukumisela ukuba amaphepha akho okanye iwebhusayithi ihlangabezana neemfuno zikaGoogle. Apha, uya kuboniswa kwakhona iimpazamo ezikhoyo oya kuzifuna ukulungisa kwiwebhusayithi yakho kunye nendlela yokuphucula iwebhusayithi yakho ngokubanzi.
Ngokwesiqhelo, unokukhetha iwebhusayithi elayisha amaphepha ngokukhawuleza. Nantoni na ende kunemizuzwana eli-10 iqala ukuziva ngathi imini yonke. Kungenxa yoko le nto ukulayisha iwebhusayithi ngokukhawuleza kubalulekile kuwe nakubabukeli bakho. UGoogle ufuna abasebenzisi bayo ukuba bonwabe, oko kuthetha ukuba bafuna iwebhusayithi ngokukhawuleza. Ke iwebhusayithi yakho kufuneka ikhawuleze ngokukhawuleza ukuba iGoogle ibeke iwebhusayithi yakho. Kwaye sidinga oku ukuba iwebhusayithi yakho ivele kukhangelo oluphezulu, inike ishishini lakho amathuba okukhula.